मुलुकमा यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को झण्डै दुहाई तिहाईको सरकार छ । निर्वाचन मार्फत गठन भएको यो सरकारलाई लोकतान्त्रिक सरकारनै मान्नु पर्दछ । तर सरकारले जुन किसिमका क्रियाकलाप गरिरहेको छ । त्यसले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक सरकार हो भनेर भन्ने अवस्था देखिन छाडेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा बुधबार व्यास नगरपालिका वडा नं १ र ११ जोड्ने बुल्दी खोलाको पुल उद्घाटनको घटनालाई लिन … Continue reading सरकार अधिनायकवादको बाटोमा
आधारभूत अस्पताल निर्माण अवरोध नगरौं
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्धेश्य सहित ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य थालनी गरेको छ । ति आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मध्ये अधिकांशको सोमबार नै उद्घाटन गरिएको छ । नेपालको संविधानले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने खुटकिलो रुपमा अहिले सम्म अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरुमा आधारभूत अस्पताल बनाउन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले … Continue reading आधारभूत अस्पताल निर्माण अवरोध नगरौं
अवैध क्रसरको समस्या देशव्यापी समस्या रहँदै आएको छ । खासगरी दर्ता नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेका कारण क्रसर उद्योगका विषयमा समस्या सिर्जना हुन पुगेको हो । पछिल्लो समय कम्पनी रजिष्टरको कार्यालयमा दर्ता सिधै क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्नेक्रम बढ्दै गएसगै यसले एक किसिमको समस्या सिर्जना हुन पुगेको थियो । जुन विषय स्थानीय तह र प्रशासनलाई समेत टाउको दुःखाईको विषय बन्दै आईरहेको थियो । यस अर्थमा … Continue reading कार्वाहीमा क्रसर उद्योग
Seimadidaily (सेतीमादी) December 1, 2020 Leaveacomment
पछिल्लो समय मानव र वन्यजन्तुबीचको द्धन्द्ध बढ्दै जान थालेको छ । यसरी मानव र वन्यजन्तुबीच द्धन्द्ध बढ्दै जाने क्रममा वन्यजन्तु र वनस्पतिहरुमाथि मानिसहरुको अतिक्रमण बढ्दै जान थालेको छ । जसले वन्यजन्तुले मानिसहरुमा माथि भौतिक आक्रमणका घटनाहरु दिनप्रति दिन बढ्दै जान थालेका छन् । त्यस्तै वनस्पतिहरु माथि माथि मानिसहरुले गरेको अतिक्रमणका कारण जलवायु परिवर्तन देखि बाढी पहिरोका घटनाहरु समेत बर्षेनी बढ्दै गईरहेको र ति घटनामा परी … Continue reading सन्तुलन कायम गर्नेमा ध्यान दिने कि ?
Seimadidaily (सेतीमादी) November 27, 2020 Leaveacomment
छिम्केश्वरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा जुट्ने कि ?
समुन्द्री सतहबाट २ हजार १ सय ३४ मिटरको उचाईमा रहेको छिम्केश्वरी पर्यटकीय हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको स्थान हो । छिम्केश्वरीको शीरमा रहेको छिम्केश्वरी मन्दिर, त्यहाँबाट देखिने हिमश्रृङखला र अन्य प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरु छिम्केश्वरीको प्रमुख विशेषता हो । यसका अतिरिक्त छिम्केश्वरी र आसपासको क्षेत्रको जैविक विविधता समेत छिम्केश्वरीको थप विशेषता पर्दछन् । आँबुखैरेनी देखि १५ किलोमिटरको यात्रा र बन्दिपुर देखि पनि त्यतिकै दुरीमा रहेको छिम्केश्वरी यस … Continue reading छिम्केश्वरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा जुट्ने कि ?
Seimadidaily (सेतीमादी) November 25, 2020 Leaveacomment
थपिदै सुरक्षा चुनौती
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गतिविधीका कारण सिङगो मुलुकमा सुरक्षा चुनौती थपिदै जान थालेको छ । खासगरी प्रतिवन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देशका विभिन्न भागमा सैन्य तालिमको गतिविधीलाई अगाडि बढाएसगै सुरक्षा चुनौती थपिन थालेको हो । उच्च सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिए अनुसार कोरोना संक्रमणको मौका छोप्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पूर्व र पश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा सैन्य गतिविधी सञ्चालन गरेको बुझिएको छ । सैन्य गतिविधी अगाडि बढाएसगै नेकपाले … Continue reading थपिदै सुरक्षा चुनौती
Seimadidaily (सेतीमादी) November 23, 2020 Leaveacomment
नेपालको कानुनले जुवातास जुवातास खेल्ने खेलाउने दुबै कार्यलाई निषेध गरेको छ । कसैले जुवातास खेल्ने खेलाउने गरेमा दुबै कार्यलाई अपराध मानिन्छ र कानुन बमोजिम कार्वाही समेत हुने गर्दछ । नेपालको वर्तमान कानुनलाई आधार मान्ने हो भन्ने पहिलो पटक जुवा तास खेल्ने र खेलाउने व्यक्तिलाई तीन महिना सम्म कैद र ३० हजार सम्मको जरिवाना रहेको छ । त्यस्तै दोस्रो पटकमा एकबर्ष सम्म कैद वा जरिवाना रहेको … Continue reading रोकिएन जुवातास
Seimadidaily (सेतीमादी) November 22, 2020 Leaveacomment
तत्कालका लागि टर्यो नेकपा भित्रको संकट
सत्तासिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)भित्र देखिएको चरम विवाद तत्कालका लागि टरेको छ । विवाद यति चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो पार्टी विभाजन हुने खतरा समेत रहेको थियो । तर अन्तिम समयमा पार्टीका पहिलो वरियताका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो अडानबाट एक कदम पछाडि हटि सचिवालय बैठकमा सहभागी भएसगै नेकपा भित्रको तत्कालको संकट टरेको हो । यद्यपी तत्कालका संकट टरेता पनि अबको ८ दिन पछि हुने … Continue reading तत्कालका लागि टर्यो नेकपा भित्रको संकट
Seimadidaily (सेतीमादी) November 20, 2020 Leaveacomment
देवीबहादुर बस्न्यातविषय प्रवेशसिंजा राज्यको पतन पश्चात कर्णाली र गण्डकी क्षेत्रमा बाइसे र चौविसे राज्यहरु स्थापना भएका थिए । चौविसे राज्य भित्र तनहुँ पनि एक थियो । हालको तनहुँ जिल्ला भित्र तनहुँको साथसाथै मिरलुङकोट , रिसिङ्ग , घिरिङ्ग, गजरकोट , किहुँ , राजपुर, गलेखामकोट र ढोर राज्यहरु पनि चौविसे राज्यहरुको गणना भित्र पर्दथे । तनहुँ , रिसिङ्ग, राजपुर, मिरलुङ्गकोट, रामकोट ( रामजाकोट)र गजरकोटमा सेन राजाहरुको शासन … Continue reading गलेखामकोटको ऐतिहासिक परिचय
Seimadidaily (सेतीमादी) November 17, 2020 November 17, 2020 Leaveacomment
तिहारमा तडक भडक नगरौं
तिहार हिन्दू धर्मालम्बीहरुको दशै पछि दोस्रो ठूलो चाड हो । पाँच दिन सम्म मनाईने तिहारको विशेष महत्व रहेको छ । हिन्दू धर्म शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार सूर्यका छोरा यमराजले आफ्नी बहिनी यमुनाको निम्तो स्वीकार गरी बहिनीको घरमा गई रमाईलो मनाएको हुँदा तिहारका पाँच दिनलाई यमपञ्चक मानिएको हो । यमुनाकोमा रहँदा यमुना व्यवहारले यमराज निकै प्रसन्न भई यमराजले बहिनी यमुनालाई वर माग्न आग्रह गर्दा यमुनाले हरेक … Continue reading तिहारमा तडक भडक नगरौं
Seimadidaily (सेतीमादी) November 13, 2020 Leaveacomment